देख्ने बित्तिकै साक्षत माहादेव को दर्शन सँगै ॐ लेखेर शेयर गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ !! | सुदुरपश्चिम खबर
देख्ने बित्तिकै साक्षत माहादेव को दर्शन सँगै ॐ लेखेर शेयर गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ !!
शिव पूजाको समयमा भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता गल्तिःशंख जलःभगवान शिवले शंखचुड नामक अ सु रका ब ध गरेका थिए। शंखलाई त्यसै अ शु रको प्रतिकको रुपमा लिइन्छ, जो भगवान विष्णुका प्रमा भक्त थिए। त्यसैले भगवान बिष्णुको पूजा शंखबाट जल चढाईन्छ शिवको होइन।
पुष्पःभगवान शिवको पूजामा केशर, मालती, चम्पा, चमेली, जाहि जुही जस्ता पुष्प चढाउनु हुँदैन।तुलसीको पत्ताःजालन्धर पत्नी वृन्दाको अंशबाट तुलसीको ज’न्म भएको हो। जसलाई भगवान विष्णुले आफ्नी पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेका थिए। त्यसकारण शिव पूजाको दौरानमा भुलेर पनि तुलसी चढाउनु हुँदैन। कालो तीलःकालो तील भगवान बिष्णुको मयलबाट उत्पत्ति भएको मान्यता रहेको छ। त्यसकारण यो पनि शिव पूजामा अर्पण गर्नु हुँदैन।
टुक्रिएको चामलः भगवान शिवलाई अक्षता यानी साबिक चामल मात्र अर्पित गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। टुक्रिएको चामल अशुद्ध र अपूर्ण हुने हुनाले यसलाई पूजाको दौरानमा चढाउने गरिंदैन। सिन्दुरःसिन्दुरलाई सौभाग्यको प्रतिक मानिन्छ, तर शिब बैरागी भएकाले उनलाई सिन्दुर अर्पण गरिंदैन
काठमाडौँ । शिव पूजाको समयमा भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता गल्तिःशंख जलःभगवान शिवले शंखचुड नामक अ सु रका ब ध गरेका थिए। शंखलाई त्यसै अ शु रको प्रतिकको रुपमा लिइन्छ, जो भगवान विष्णुका प्रमा भक्त थिए। त्यसैले भगवान बिष्णुको पूजा शंखबाट जल चढाईन्छ शिवको होइन।
टुक्रिएको चामलः भगवान शिवलाई अक्षता यानी साबिक चामल मात्र अर्पित गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। टुक्रिएको चामल अशुद्ध र अपूर्ण हुने हुनाले यसलाई पूजाको दौरानमा चढाउने गरिंदैन। सिन्दुरःसिन्दुरलाई सौभाग्यको प्रतिक मानिन्छ, तर शिब बैरागी भएकाले उनलाई सिन्दुर अर्पण गरिंदैन। (khabar25media बाट सभार)